राजस्व साझेदारी संग घर देखि अनलाइन पैसा कमाउन | देखाउनुहोस् शीर्ष
राजस्व साझेदारी संग घर देखि अनलाइन पैसा कमाउन
सबै दुनिया भर हरेक दिन मानिसहरूले वेबमा खोज छन्, how to earn money online sitting at home. मुद्रा अनलाइन कमाउन गर्न सजिलो तरिका को एक राजस्व साझेदारी छ. गलत जानकारी प्रदान घोटाला साइटहरु धेरै छन्. त्यसैले तपाईं विश्वसनीय राजस्व साझेदारी साइट पत्ता लगाउन छ, जो तपाईं राम्रो प्रोत्साहन दिन साथै आफ्नो उपार्जन वृद्धि हुनेछ.
यातायात मनसुन सबै भन्दा राम्रो विज्ञापन र राजस्व साझेदारी कम्पनी को छ. The company earns money by selling advertisement to the people who seek advertisement and traffic engage for their वेबसाइट. कम्पनी, त्यसपछि आफ्नो पार्टनर संग राजस्व साझेदारी. यातायात मनसुन एक अन्तर्राष्ट्रीय accredited कम्पनी हो. त्यसैले तपाईं तिनीहरूलाई सामेल गर्न सक्छन् र सजिलै घरमा बसिरहेका पैसा कमाउन.
प्रश्न केही दम्पतीले जस्तै आफ्नो मनमा त्यहाँ खडा हुनेछन्:
– राजस्व साझेदारी के छ?
– तपाईं उपयोग गर्न सक्छन् कसरी यातायात मनसुन अनलाइन पैसा कमाउन?
– तपाईं एक महिना मा पैसा बनाउन सक्छौं कति?
तपाईं बस यस लेखमा माध्यम पढ्न र यो कार्यान्वयन गर्न यी प्रश्नहरूको जवाफ तपाईं सबै प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने.
राजस्व साझेदारी के छ?
राजस्व साझेदारी व्यापार साझेदार बीचमा राजस्व साझेदारी मतलब. यो पनि एक प्रोत्साहन कार्यक्रम रूपमा regarded छ. कल्पना गर्नुहोस्, तपाईं कम्पनी हो र तपाईं मालिक हुनुहुन्छ. तपाईं राजस्व साझेदारी भनिन्छ गरिनेछ आफ्नो संगत वा व्यवसाय सहयोगी ताजा ग्राहकहरु प्रक्रिया सङ्केत लागि एक प्रतिशत उन्मुख भुक्तान तिर्न भने.
यातायात मनसुन राजस्व साझेदारी कम्पनीहरु असल उदाहरणहरू को छ.
तपाईं अनलाइन पैसा कमाउने यातायात मनसुन प्रयोग कसरी?
सामान्यतः, प्रयोग अनलाइन पैसा कमाउन चार तरिकामा छन् यातायात मनसुन.
नगद लिंक: यो विज्ञापन क्लिक गर्न तिरियो को सामान्यतया एक प्रकारको छ. यो प्रणाली साझेदार आफ्नो आय वृद्धि गर्न मदत गर्छ. यातायात मनसुन PTC उद्योग मा धेरै राम्रो छ. यो PTC विज्ञापन देखि एक ठूलो राजस्व छ. तपाईं आफ्नो उपार्जन वृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ भने 100% हरेक दिन आफ्नो नगद लिंक क्लिक.
छन्4नगद लिंक को प्रकार क्लिक गर्न उपलब्ध छन्;
0.001 नगद लिंक
0.005 नगद लिंक
0.01 नगद लिंक
0.02 नगद लिंक
रेफरल: यातायात मनसुन offersagood commission to its referrer’s. एक प्रमोटर ग्राहक ल्याउँछ जब उहाँले प्राप्त हुनेछ 10 हरेक खरीद मा प्रतिशत आयोग र 100 हरेक नगद लिंक क्लिक प्रति प्रतिशत आयोग.
राजस्व साझेदारी: यातायात मनसुन दिन्छ तपाईं एक 110 फिर्ता हरेक विज्ञापन पैक प्रतिशत पैसा. विज्ञापन पैक मूल्य देखि शुरू छ $50. यातायात मनसुन तपाईं आफ्नो साइट मा स्थिति साझेदारी दिन्छ. हरेक मा, विज्ञापन पैक खरिद तपाईं साझेदारी स्थिति अनलक गर्ने मौका प्राप्त हुनेछ. एक साझेदारी स्थिति तपाईं दिन्छ एक $55 फिर्ती. यो मतलब 110% हरेक विज्ञापन पैक खरीद नकदी फिर्ता.
संबद्ध कार्यक्रम: तपाईं चयन गर्न सक्नुहुन्छ यातायात मनसुन सहभागी कार्यक्रम आफ्नो आय वृद्धि गर्न. तपाईं प्राप्त हुनेछ 10 सन्दर्भ मा प्रतिशत आयोग र 100 नगद लिंक मा प्रतिशत आयोग.
तपाईं एक महिना मा पैसा बनाउन सक्छौं कति?
तपाईं चिन्नुहुन्छ भने तपाईं एक महिना मा पैसा धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ यातायात मनसुन रणनीति धेरै राम्रो. एउटा उदाहरण तपाईं क्रिस्टल स्पष्ट बनाउन हुनेछ.
दैनिक आय क्लिक विज्ञापन: $0.01*10 विज्ञापन = $0.10 (मुक्त सदस्य)
यदि 10 Referrals: 10*$0.10= $1 प्रति दिन ($30 प्रति महिना)
यदि 100 Referrals: 100*$0.10= $10 प्रति दिन ($300 प्रति महिना)
तपाईं कमाउन सक्नुहुन्छ $300 यदि प्रति महिना 100 Referrals. आकाश आय को कुरा मा यहाँ सीमा छ.
पैसा कमाउन चासो भने अनलाइन माथि घर चिन्ह बसिरहेको यातायात मनसुन आज.
यातायात मनसुन साइन अप
← शहर ट्याक्सी टैक्सी तिर फ्री £ 10 (Heathrow, लन्डन, न्यूयोर्क) Android मा & iPhone शीर्ष 10 साइटहरु बनाउन & अनलाइन मुक्त पैसा कमाउन (बनाउन $10,000+ एक महिना डलर →